XOG: Sababta Liverpool Ugu Guuleysan Doonto Horyaalka Premier League, Taariikhda Oo Caddaynaysa Iyo Isbaarooyinka Ay Tahay Inay Ka Gudubto - Latest football news
XOG: Sababta Liverpool Ugu Guuleysan Doonto Horyaalka Premier League, Taariikhda Oo Caddaynaysa Iyo Isbaarooyinka Ay Tahay Inay Ka Gudubto
Liverpool ayaa bisha January ku dhamaysanaysa iyadoo shan dhibcood ku haysa hoggaanka horyaalka Premier League, laakiin way kasii badsan lahayd haddii ay guuleysan lahayd ciyaartii xalay ay garoonkeeda Anfield barbaraha kula gashay Leicester City.
Sida taariikhdu ina bartay, 26-kii sannadood ee ugu dambeeyey, waxa inta badan horyaalka ku guuleysanayey kooxihii hoggaanka hayey dhamaadka bisha January sida ay hadda Liverpool samaysay oo kale, waana sabab weyn oo daliil u ah in tababare Jurgen Kopp uu kooxdan usoo hoyn doono horyaalkeedii ugu horreeyey muddo soddon sannadood ah.
20 ka mid ah 26-kii kooxood ee bisha January ku dhamaystay hoggaanka ayaa horyaalka kusoo guuleystay, waxaana siibasho ku dhacday lix kooxood oo kaliya oo xajisan kari waayey hoggaamintooda, waxaana kooxaha ugu badan oo dhibaateeyey naadiyadaasi ahaayeen Manchester United iyo Arsenal.
Sannadkii 1993 waxa bisha koowaad ee sannadka ku dhamaysatay hoggaanka kooxda Norwich, hase yeeshee Manchester United oo jiilkii dahabiga ahaa usoo baxeen ayaa koobka kaga guuleysatay, waxaana mar kale ay sidaas oo kale kooxdii uu hoggaaminayey Sir Alex Ferguson ay ku samaysay Newcastle United sannadkii 1996-kii iyo Arsenal sannadkii 2003. Arsenal ayaa iyaduna saddex sannadood sidan oo kale samaysay.
26-kaas sannadood ee ugu dambeeyey, farqiga ugu badan ee kooxda hoggaanka haysaa ay sarraysay waxay ahayd 5.2 marka celcelis ahaan loo xisaabiyo, raadkaasna waxa hadda ku taagan Liverpool oo haysata 5 dhibcood xilli bishii January dhamaatay.
Kooxaha kaliya ee farqigii ugu badnaa ee dhibco ah xilligan oo kale hoggaanka ku hayey waxay ahaayeen Manchester City oo xili ciyaareedkii tegay 15 dhibcood hoggaanka ku haysay iyo Manchester United oo sannadkii 2001 intaas oo kale hoggaanka ku haysatay.
Chelsea ayaa sannadkii 2006 waxay xilligan oo kale hoggaanka ku haysay 14 dhibcood, halka Man United ay 1994-kii ku haysay 13 dhibcood.
Arrinta xiisaha leh waxay tahay, in Newcastle oo kaliya ay ku fashilantay inay horyaalka ku guuleysato iyadoo January ku dhamaysatay lix dhibcood oo ay hoggaanka ku haysay sannadkii 1996-kii, waxaana ay dhibbane u noqotay Manchester United oo sida hillaaca u dhaaftay.
Sannadkii 2012 ayaa uu horyaalku si xamaasad leh ku dhamaaday markii la kala furfuri kari waayey Manchester United iyo Manchester City, kuwaas oo illaa kulankii ugu dambeeyey ay isku-dhibco noqday, hase yeeshee farqiga goolasha darteed ay Man City horyaalka ku qaadatay.
Marka taariikhdaas hore loo eego, Liverpool waxay haysataa fursad weyn oo ay markeedii ugu horreeyey ku guuleysato horyaalka Premier League oo aanay hal marna qaadin intii magacan loo bixiyey, waase inay ka dagaallanto inay marto dariiqa kooxaha aynu sare kusoo sheegnay ee inta laga daba yimid haddana horyaalka laga qaatay.